के होला फेसबुकले पत्रिका चलाए ? ~ Bijay Timalsina
यत्रा प्रयोगकर्ता भएको फेसबुक पछिल्लो समय विश्वभरको सञ्चारमाध्यम र तिनका उपभोक्ताबीच पुल बन्दै आएको थियो, सूचनाको साझेदारीका लागि । जुकरवर्गले खुलाएअनुसार फेसबुक यस्तो "एल्गोरिदम" बनाउन चाहन्छ जसले प्रयोगकर्ताको इच्छा र रुचि आफैं बुझेर तिनको वालमा त्यस्तै खालको समाचार र जानकारी पठाउनेछ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो रुचिको विषयमा संसारभरका समाचार, जानकारी पाउने छन्, त्यो पनि शब्द, तस्बिर र भिडियोको माध्यमबाट ।
हुन त फेसबुकले केही अघि नै आफ्नो प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसार न्युजफिडको सेटिङमा परिवर्तन गरेको छ । अहिले पनि प्रयोगकर्ताले आफ्नो रुचिअनुसारको पोस्ट देखिने गरेर फिड सेटिङ मिलाउन सक्छन् । आफूलाई मन नपर्ने पोस्ट गर्नेलाई अनफलो गर्न सक्छन् । तर, फेसबुकले अब गर्न लागेको कामचाहिँ विशेष गरेर समाचारसँग सम्बन्धित छ । फेसबुकको "समाचारपत्र" वाला योजना सफल भए, आफ्ना प्रयोगकर्तालाई के समाचार र जानकारी दिने भन्ने निक्र्योल उसैले गर्नेछ ।
सञ्चारमाध्यम र प्रयोगकर्ताको बीचमा फेसबुक रहन्छ जसले आफ्ना कुन प्रयोगकर्तालाई कस्ता समाचार र जानकारी दिने भनेर "फिल्टर" गर्नेछ । धेरैले यसलाई परम्परागत मिडिया र सोसल मिडियाबीचको लडाइँ भनेका छन् । यो, हो पनि । किनकि कुनै सञ्चार संस्थाको सम्पादकले आफ्ना पाठकलाई के जानकारी र समाचार दिने भनेर निक्र्योल गरेझैं फेसबुकले आफ्नो भूमिका तयार पार्न लागेको छ । जसका कारण्ा सञ्चारमाध्यमले सेयर गरेको समाचार फेसबुकका सबै खालका प्रयोगकर्तामाझ पुग्नेभन्दा पनि फेसबुकले पहिचान गरेको प्रयोगकर्ताकहाँ मात्रै पुग्नेछ । प्रयोगकर्ताबाट लिइएको सयौं तथ्यांकको आधारमा बन्ने एल्गोरिदमले प्रयोगकर्ताको रुचि थाहा पाउनेछ । जसको आधारमा बाँडिने जानकारी तय हुनेछ । पछिल्ला वर्ष समाचार साझेदारीको प्रमुख स्रोत सोसल मिडिया हुँदै गएको अवस्थामा फेसबुकको यो कदमले परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई भने असर पार्ने विज्ञहरको बुझाइ छ ।
वासिङटनमा कार्यालय रहेको थिङकट्याङकहरको संस्था प्युरिसर्च सेन्टरले अमेरिकामा गरेको तथ्यांकले के देखाउँछ भने जानकारी लिने मानिसको तरिका पछिल्ला दिनमा बदलिएको छ । प्रयोगकर्ताहर आफैं जानकारीको स्रोतमा पुग्नेभन्दा पनि आफ्ना वाल र टाइमलाइनमा देखिन समाचारको लिंकको आधारमा जानकारी र सूचना थाहा पाउँछन् । रिसर्च भन्छ, ६४ प्रतिशत अमेरिकनहर फेसबुक चलाउँछन् र ३० प्रतिशतले फेसबुकको माध्यमबाट समाचार थाहा पाउँछन् ।
त्यस्तै, यु-ट्युब चलाउने अमेरिकी जनसंख्या ५१ प्रतिशत छ र १० प्रतिशत अमेरिकीहर यु-ट्युबबाट समाचार थाहा पाउँछन् । यसमा लिंकडिन र टि्वटरको पनि केही हिस्सा छन् । यस्तै ८ प्रतिशतले टि्वटरबाट र ३ प्रतिशतले लिंकइनबाट समाचार थाहा पाउने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । सोसल मिडियाका प्रयोगकर्तामध्ये ५० प्रतिशतले समाचार, तस्बिर वा भिडियो सेयर गर्ने गरेको ४६ प्रतिशतले त्यसबारे छलफल गर्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
रिसर्चअनुसार प्रयोगकर्ताको रुचि मनोरञ्जनात्मक समाचारमा रहेको देखिन्छ । खासमा ७३ प्रतिशतले मनोरञ्जनात्मक समाचार नियमित रपमा फेसबुकबाट हेर्छन् । यस्तै ५७ प्रतिशतले खेलकुदका समाचार फेसबुकबाट नियमित रपमा थाहा पाउँछन् । रिसर्चले के पुष्टि गर्छ भने सञ्चारमाध्यमको उपभोक्ताको ठूलो समूहले फेसबुकबाट समाचार थाहा पाउँछ । फेरि फेसबुकले नै कुन समाचार कसलाई पठाउने निक्र्योल गर्न थाल्यो भने के हुन्छ ?
यसले परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई के असर पार्छ ? प्रयोगकर्तालाई के असर पार्छ ? सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वल आचार्य भन्छन्, "फेसबुकले यस्तो कदमले प्रयोगकर्तालाई फाइदा नै पुग्छ किनकि उनीहरले आफ्नो रुचिको समाचार र जानकारी मात्रै पाउँछन् ।"
यो कदमले नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई समेत प्रभाव पार्नेछ । "फेसबुकले नेपाली भाषाको सामग्रीको सट्टा अंग्रेजी भाषाको सामग्रीलाई मात्रै आफ्नो प्रयोगकर्तासमक्ष सिफारिस गर्‍यो भने त्यसले नेपालका सञ्चारमाध्यमलाई असर पार्छ," उनी भन्छन् ।
"त्यसैले कसरी धेरैभन्दा धेरै उपभोक्तासमक्ष पुग्ने भनेर सञ्चारमाध्यमले फरक खालको रण्ानीति बनाउनुपर्छ," उनी मान्छन् । नेपालमा फेसबुकको ३८ लाख प्रयोगकर्ता छन् । तीमध्ये ३० लाख २५ वर्षमुनिका छन् । यो फेसबुकको एड प्लेटर्फमले उपलब्ध गराएको तथ्यांक हो । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालका अधिकांश फेसबुक प्रयोगकर्ता २५ वर्षमुनिका छन् र स्वभावतः उनीहर आफ्नो स्मार्टफोनमै समाचारहर चाहन्छन् ।
उनीहर समाचारको खोजीमा सोझै कुनै साइटमा पुग्नेभन्दा पनि फेसबुकमा सेयर भएको राम्रा समाचारको लिंक क्लिक गर्छन् । फेसबुकले आफ्नो योजना लागू गरेमा यस्ता समाचार ती व्यक्तिकहाँ मात्रै पुग्छ जसलाई सम्बन्धित विषयमा रुचि छ । त्यसैले सञ्चारमाध्यमले धेरैभन्दा धेरै उपभोक्ताकहाँ पुग्न नयाँ रण्ानीति बनाउनुपर्ने हुन्छ, किनकि फेसबुकले आफ्नो र प्रयोगकर्ताको स्वार्थका लागि रणनीति फेर्दैछ, सञ्चारमाध्यमका लागि होइन ।